Unkosikaiz kaHHP ukhala ngabangafuni baqome abafelokazi
ULERATO Sengadi owayengunkosikazi kaHHP okhathazwa abantu abangafuni abafelokazi baqhubeke nempilo Isithombe: INSTAGRAM
Bongiwe Zuma | August 17, 2020
UKUBA umfelokazi kusahambisana nengcindezi enkulu kubantu besifazane yize sekwaba nenkululenko eNingizimu Afrika. Lokhu kushaya kuzwele ngisho kosaziwayo abaziwa umhlaba wonke nabathola kunzima ukuqhubeka nempilo emuva kokushonelwa abayeni babo. Muva nje USimphiwe Ngema ufake izithombe zakhe ekhulelwe ezinkundleni zokuxhumana eveza ukuthi ujabule kangakanani.
Uphinde wadalula ngisho uyise wengane uTino Chinyani naye ongusaziwayo. USimphiwe selokhu efake lezi zithombe akazange akuthole ukuphumula abantu kuTwitter, Facebook naku-Instagram bethi uvumbuka kanjani nesisu esanda kuba ngumfelekazi. Kuzokhumbuleka ukuthi washonelwa umyeni owayengumlingisi ngo-2017 uDumi Masilela. Yize engazange athande uSimphiwe ukuphawula kakhulu ngokugxekwa kwakhe kodwa kushaye kwazwela kuTino wakuveza ukuthi abazimisele ngokulalela izimfamona kunalokho bazoqhubeka bajabule othandweni labo.
ULerato Sengadi naye ongumfelekazi owayeshade nesihlabani somculi esingasekho emhlabeni uHHP uhlulwe ukuzibamba wangenelela kulolu daba.
ULerato uveze ukuthi abantu abagxeka ukuqhubeka nempilo kukaSimphiwe bakhombisa ukungabi nazwelo ngoba benganalwazi ngobuhlungu umuntu abhekana nabo ngokushonelwa umyeni.
"Angeke bazi futhi angeke bazi kuthathani ukuqala uthande kabusha. Okusempeleni ngokwabantu uma umfelokazi awufanelwe ukujabula nokuqala kabusha, kumele uhlale usezinhlungwini uzilile. Abantu bayaxaka," kusho uLerato. Emuva kwalokho ekhasini likaTwitter likaLerato, iningi labesifazane lizwakalise okukhululu ukuhlukumezeka nokuthunukala amanxeba kulabo esebeke babhekana nalesi simo.